Nanivana sary vaovao roa an'ny Motorola Moto Z3 Play | Androidsis
Navoaka ny sary vaovao an'ny Moto Z3 Play
Eder Ferreno | | Motorola, About us
Ny Motorola avo lenta vaovao dia ho avy tsy ho ela eo amin'ny tsena, ny faritra Moto Z3. Misy ny maodely iray izay efa henontsika matetika nandritra ireo herinandro ireo. Momba ny Moto Z3 Play io. Sary vaovao no efa voasivana amin'ity maodely ity. Noho ireo sary ireo dia afaka mianatra bebe kokoa momba ilay fitaovana isika, izay toa mampiasa modules.
Ny telefaona indray dia mampiseho ny maha-ilaina ny modules, izay nanjary iray amin'ireo marika mampiavaka ny faran'ny Motorola. Toa amin'ity tranga ity ny Moto Z3 Play, azo havaozina ny telefaona rehefa tonga ny 5G mampiasa maodely tokana.
Izahay dia efa manana ny sary roa voalohany an'ny finday tafaporitsaka. Ao amin'izy ireo dia hitanao fa ny Moto Z3 Play dia ho telefaona tena tsara, iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena. Ho fanampin'izay, amin'ny resaka famolavolana, ny telefaona dia mijanona ho lamaody tokoa, miaraka amin'ny efijery misy zana-kazo manify sy 18: 9 ratio. Ny mpamaky ny dian-tànana dia hita eo anilan'ny fitaovana. Filokana mahaliana.
Na dia tsy misy fisalasalana aza dia ilay modely miavaka, na ny endriny na ny toerany. SAINGY Hitanay ny fomba ahazoan'ny Motorola avo lenta ireo modely ireo. Filokana izay toa mandeha tsara eo amin'ny tsena hatreto.
Ny 6 jona no daty hanehoana ity farany ambony marika ity, izay ahitantsika ny Moto Z3 Play. Ka ny fiandrasana amin'ity lafiny ity dia tena fohy. Ka afaka herinandro mahery dia hanana ny angona rehetra momba ireo maodely ireo isika.
Tsy misy isalasalana, hahaliana ny mahita izay notahirizin'ny Motorola. Satria ny eo anelanelan'ny marika izay amidy tsara indrindra. Na dia ireo finday ireo aza, miaraka amin'ny Moto Z3 Play no mitarika, dia mety hiafara amin'ny fandresena ireo mpampiasa ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Navoaka ny sary vaovao an'ny Moto Z3 Play
Jhonny De Gouveia dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Mahafinaritra ny pejinao.
Valiny tamin'i Jhonny De Gouveia
Xiaomi Mi 8: Ny sary tafaporitsaka amin'ny endriny, ny boaty ary ny animojis dia voamarina